Waa kuwee 2-Taliye ee lagu wado in loo magacaabo NISA Iyo Booliiska? | Waa kuwee 2-Taliye ee lagu wado in loo magacaabo NISA Iyo Booliiska? | Hal Sheegaha La Hubo
Waa kuwee 2-Taliye ee lagu wado in loo magacaabo NISA Iyo Booliiska?
Warar hoose oo ay heshay Halsheeg Media, ayaa sheegeysa in uu socdo qorshe lagu magacaabayo taliyeyaasha Nabadsugidda iyo booliiska Somalia.
Ilo xog ogaal ah ayaa Jamhuuriyada Online, u sheegay in maalinta berri ah oo Isniin laga yaabo in la magacaabo taliyeyaasha labada Hay’adood ee booliiska iyo Nabadsugidda oo muddo dheer aanan lahayn wax hogaan ah.
Xilalkaan ayaa waxaa u sharaxan masuuliyiin xilal horey usoo qabtay saraakiil ciidan iyo shaqsiyaad kale oo xil doon ah maadaama ay dowladda federaalka xilalka ay magacaawdo aysan u eegin aqoon iyo xirfad intaba.
Qorshaha lagu magacaabayo labada taliye ayaa soo dhaamaday waxana markan dhiman in lagu dhawaaqo labada shaqsi ee taliyeyaasha u noqon lahaa labadaas hay’adood ee booliiska iyo NISA.
Tartanka xubnaha doonaya xilka hay’adda NISA ayaa waxa uu yahay mid aad u adag marka la eego shaqsiyaadka u sharaxan xilkaasi balse waxaa jira in agaasimaha madaxtooyada uu dhankiisa wato shaqsi u gaar uu la rabo in xilkaas loo magacaabo.
Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha madaxtooyada ayaa madaxda sare cadaadiskii ugu cuslaa ku saaray sidii xilkaas loogu magacaabi lahaa Wasiirka Qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan.
Fahad yaasiin ayaa la tilmaamay in ololaha uu ku doonayo in wasiir Jamaal loo magacaabo xilka taliyaha NISA uu soo shaac baxay maalmihii lasoo dhaafay waxayna xogaha aan heleyno sheegayaan in qorshaas umuuqdo mid guuleystay inkastoo aanan la saadaali Karin balse xaqiiqda ayaa waxa ay tahay in Fahad Yaasiin uu kamid yahay raga ay ka go’do talada dalka.
Qorshaha Fahad Yaasiin ayaa u muuqda mid Meesha ka saaraya masuuliyiin badan oo xilkaas halgan adag ugu jiray,waxana masuuliyiintaas kamid ah ,Cabdi Jiinow Calasow, Cabdiraxmaan Tuuryare, iyo Muungaab.
Marka laga soo tago xilka taliyaha NISA waxaa tartan dhinaca kale loogu jiraa xilka taliyaha ciidamada booliiska oo ay u sharaxanyihiin dhowr shaqsi inkastoo uusan tartanka u kululeyn sida kan loogu jiro xilka taliyaha Nabadsugidda.
Balse shaqsiga ilaa iminka ugu cad xilkaas ayaa waxa uu yahay Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, sida aan ka soo xiganay masuuliyiin ku dhow dhow madaxtooyada Somalia, waxana laga yaabaa in xilka taliyaha booliiska loo magacaabo masuulkaasi, maadaama madaxda sare ee dowladda federaalka ay u arkaan Jeneraal Mukhtaar inuu yahay nin qibrad leh kana soo bixi karo masuuliyadda xilkaan hadii loo magacaabo.